Garsoore Ay Neceb Tahay Liverpool Oo Loo Magacaabay Kulanka Finalka FA Cup & Jurgen Klopp Oo Cadhaysan - Laacib
HomeWararka CiyaarahaGarsoore Ay Neceb Tahay Liverpool Oo Loo Magacaabay Kulanka Finalka FA Cup & Jurgen Klopp Oo Cadhaysan
Garsoore Ay Neceb Tahay Liverpool Oo Loo Magacaabay Kulanka Finalka FA Cup & Jurgen Klopp Oo Cadhaysan
Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa ka cadhaysan garsooraha loo doortay inuu qabto ciyaarta finalka FA Cup ee Sabtida ay Liverpool iyo Chelsea ku kala calaf-qaadayaan garoonka Wembley. Liverpool ayaan jeclaysanin markii ay maqleen warka shaacinta garsooraha ciyaartan, waxaana markiiba dareenkiisa caddeeyey tababare Jurgen Klopp.
Liverpool ayay u tahay tallaabadii ugu dambaysay ee ay u qaadayaan inay dhamaystirtaan xilli ciyaareed cajiib ah, iyagoo ku hamiyaya inay ku guuleystaan afar koob.
Haddii ay Chelsea ku garaacaan Wembley, waxay Liverpool u noqon doontaa koobkii labaad ee ay xilli ciyaareedkan ku guuleystaan, waxaana uga horreeyey Carabao Cup oo bishii January ay rikoodheyaal kaga qaadeen Chelsea oo iyaduna waqtigan u diyaarsan aargoosi.
Finalkii Carabao Cup ayay murano hadheeyeen markii saddex gool la diiday markii offside lagu qaaday, waxaana soo dhex gashay VAR.
Craig Pawson ayaa Sabtida laga sugayaa go’aamo adag, iyadoo tababare Jurgen Klopp u qarsan kari waayey sida uu uga cadhaysan yahay go’aanka garsoorahan loogu doortay ciyaaarta.
Waxa caawain doona Paul Tierney, waxaana 43 jirkan si aad ah loola socon doonaa haddii ay sii jiri doonaan go’aamadiisa ay Liverpool rumaysan tahay in uu inta badan kaga soo horjeedsado kooxdaas.
Sannadkii 2013kii ayuu Craig Pawson kusoo biiray shaqada garsoorka Premier League, waxaana uu Liverpool u qabtay 31 ciyaarood oo ay lix mar oo kaliya guul-darro la kulmeen.
Ciyaartii West Ham United ee horraantii xilli ciyaareedkan ayuu Craig Pawson oo u dhashay Sheffield ayuu Jurgen Klopp qarsan kari waayey go’aamadii uu qaatay Pawson, waxaana uu sidoo kale hore cabasho uga muujiyey Paul Tierney.